Joojinta suufka adigoo isticmaalaya nooca 3-step-recovery step model Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Goynta Porn Qaabka dib-u-soo-celinta 'Reward Foundation' ee seddexda tallaabo ah
Mashruuca Reward Foundation ee habka dib u soo kabashada saddexda tallaabo
Kooxda 'The Reward Foundation' waxay soo saareen qaab saddex-tallaabo dib u soo kabasho ah oo wax looga qabanayo arrinta ku saabsan adeegsiga cilad-darrada ah ee sawirrada internetka. Waa hab fudud oo lagu joojiyo isticmaalka porn-ka oo looga gudbo balwadda. Ka soo kabashadu waxay muhiimad ahaan u tahay u oggolaanshaha maskaxda inay ka bogsato culeyska xad-dhaafka ah ee billowday bilooyin ama sannado. Waa hab fudud oo ku saleysan daraasad lagu sameeyo habka barashada cilmiga barashada iyo la qabatinka maskaxda uga dhex shaqeyso. Waxaad isku dayi kartaa talooyinka halkan adiga oo kaashanaya bulshooyinka soo kabashada ee qarsoon sida nofap.com or rebootnation.org. Waxaad go'aansan kartaa in aad doorbido bulshada dhabta ah ee soo kabashada nolosha sida barnaamijka 12. Haddii kale, daaweeye ku tababaran wax ka qabashada dabeecadaha galmada waxyeelada leh ayaa dabooli kara baahiyahaaga.
Daaweeyeyaal badan ayaa hadda bilaabaya inay wax ka bartaan cillad la'aanta erectile-ka iyo dhibaatooyinka kale ee la xiriira galmada sida niyad-jabka ama walwalka. Marka hubso inay hubiyaan degelkan ama Yourbrainonporn.com. Daaweeyayaasha badankood waxaa loo tababaray cilmu-nafsiga iyagoon wax ka baranin shaqada maskaxda. Dib ugu noqoshada maskaxdaada si aad u barato caado oo aad ula soo baxdo xeelado cusub ma sahlana. Si kastaba ha noqotee, waa wax la samayn karo oo waxay hagaajin doontaa noloshaada dhammaadka. Rag badan ayaa ka hadlaya "dib u soo kabashada" maskaxdooda. Sida aan ku sameyn karno kumbuyuutar isku soo ururay markii daaqado badani furan yihiin. Dib u dhiska kuwan ama Xisaab celinta iyadoo boqolaal dhalinyaro ah ay muujinayaan sida loo sameyn karo.
Mabaadi'da Nooca Soo-kabashada
Kuwani waa mabaadi'da sadexaad:
Jooji isticmaalka porno.
Baro xirfadaha muhiimka ah ee nolosha.
Tallaabada 1 - Jooji isticmaalka porn
Soo celinta waxay dhab ahaantii bilaabi kartaa marka qofku doorto inuu joojiyo fiirinta iyo joojinta fekerka ku saabsan porno.
Si loo helo dhiirigelinta isku dayga joojinta isticmaalka porno internetka, isticmaaluhu wuxuu u baahan yahay inuu aqoonsado in uu leeyahay suurtagal ah inuu sababo dhibaatooyin caafimaad oo maskaxeed iyo jireed iyo sidoo kale bulshada. Waxay xitaa sababi kartaa in la helo diiwaan dembi. Eeg Sidee loo aqoonsan karaa dhibaato leh porno.
At The Reward Foundation waxaan isticmaalnaa weedha "ka qaad muraayadda boogta". Qof kastaa wuu fahamsan yahay in booguhu aanu bilaabi karin inuu bogsado iyada oo shumaca muraayaddu weli ku jirtaa jidhka, oo dhaawacaya. Sidaa daraadeed ka-saaraha niyadjabaha is-dhexgalka joogtada ah ee lidka sawir-gacmeedka internetka wuxuu u oggolaadaa maskax-furidda. Waxay markaa bogsiin kartaa oo dib u soo celin kartaa heerarka caadiga ah ee arousal.
Ka bilow go'aanka aad ku bixinayso. Is-dejiya bartilmaameedka maalinta 1. Hadafku waa in la bilaabo aqoonsiga calaamadaha jirkeena iyo inaan si fiican u barano sida looga jawaabo. Fiiro goorma maalinta aad u maleyneyso in aad daawato porno. Maxay sameeyaan 'dhiirigelin'inaad u daawato waxay dareemeysaa sida? Tani waa dareenka jiidashada-dagaalka ee maskaxda. Waa rabitaan ah in la helo waxoogaa raaxaysi ah neerfaha kiimikada si looga fogaado raaxo la'aanta jiritaan la'aanta iyaga. Waxay la tartameysaa rabitaan ah in la caddeeyo inaan is xakameyn karno nafteena. Dareenkaasi wuxuu digniin u yahay dopamine hooseeya ama opioids-ka maskaxda ku yar. Waxay sidoo kale tilmaamaysaa bilowga jawaabta walaaca iyadoo kacsiga adrenaline-ku-riixayo nagu riixayo "wax hadda samee!"
Awood u lahaanshada inaad xoogaa hakad gasho si aad maskaxda birta u qabatid una fikirtid kahor ficilku wuxuu caawinayaa daciifinta wadada waxayna bilaabeysaa inay caado ka joojiso. Waa jimicsi qiimo leh oo la isku dayayo in laga baxo caado kasta oo aan mar dambe la rabin. Waxay kaa caawinaysaa dhisida is-xakamaynta. Taasi waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee nolosha ee guusha muddada fog. Waa wax kasta oo muhiim u ah caqliga ama hibada. Baro sida dadka kale ula qabsadeen markay isku dayeen. Dhamaanteen waa inaan kala doorano labada xanuun, xanuunka is xakameynta ama xanuunka qoomamada.
Baadhitaan Hal Maalin Hal Maalin ah
Tani waxaa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo sida qofku ku xidhan yahay ciyaaraha, warbaahinta bulshada iyo sidoo kale porno.
Halkan waa buug laga soo xiganayo Isku Diidid Nafteena Dhimashada: Doodwadaha Dadweynaha ee Da'da Tusmada Ganacsiga, by N. Postman iyo A. Postman. (Hordhac).
Mid ka mid ah borofisarrada ayaa buugga u adeegsaneysa tijaabo ay ugu magac dartay 'e-media soon.' Afar iyo labaatan saacadood, arday kasta waa inuu ka fogaadaa warbaahinta elektarooniga ah. Markii ay ku dhawaaqday meelaynta, waxay ii sheegtay, boqolkiiba 90 ardaydu way isqabtaan, iyagoo u maleynaya inaysan wax weyn ahayn. Laakiin markay ogaadaan dhammaan waxyaabaha ay tahay inay bixiyaan maalin dhan - taleefanka gacanta, kombiyuutarka, Internetka, TV-ga, raadiyaha baabuurta, iwm. - “waxay bilaabaan inay taahaan oo ay taahaan.” [laakiin] weli way akhrin karaan buugaagta. Waxay qiraysaa inay noqon doonto maalin adag, inkasta oo qiyaastii sideed ka mid ah afar iyo labaatanka saacadood ay seexan doonaan. Waxay tiri haddii ay soonka jabiyaan - haddii ay taleefanka ka jawaabaan, dhahaan, ama ay si fudud u eegaan emaylka — waa inay ka soo bilaabaan meel hoose. "Waraaqaha aan dib u helay waa kuwo la yaab leh," ayuu yidhi borofisar.
“Waxay leeyihiin cinwaano sida 'Maalintii iigu Xumeyd Noloshayda' ama 'Khibraddii Ugu Fiicneyd ee Abid I soo martay,' had iyo jeer xad dhaaf. 'Waxaan u maleynayay inaan dhimanayo,' way qori doonaan. 'Waxaan u aaday inaan daadiyo TV-ga laakiin hadii aan sameeyo waan xaqiiqsaday, Ilaahayow, waa inaan markale dib u bilaabo.' Arday kasta wuxuu leeyahay daciifnimo u gaar ah - qaar waa TV, qaar taleefanka gacanta, qaar internetka ama PDA-da. Laakiin si kasta oo ay u neceb yihiin ka-aamusnaanta, ama sida ay u adag tahay in la maqlo taleefanka oo aan loo jawaabin, waxay waqti ku qaataan inay sameeyaan waxyaabo aysan sannado badan qaban.
Xaqiiqdii waxay ku socdaan wadada si ay u soo booqdaan saaxiibkood. Waxay sii dheereysteen wada hadallo. Mid ayaa qoray, 'Waxaan u maleynayay inaan sameeyo waxyaabo aanan ku fikirin inaan sameeyo weligey.' Khibraddu iyaga ayaa beddelaysa. Qaarkood aad ayey u saameeyeen oo waxay go'aansadeen inay iskood u soomaan, hal maalin bishii. Koorsadaas waxaan ku qaadanayaa fasallada - laga soo bilaabo Plato iyo Aristotle ilaa maanta - iyo sannado ka dib, markii ardaydii hore ay wax qoraan ama soo wacaan si ay u soo salaamaan, waxa ay xusuustaan ​​ayaa ah warbaahinta oo dhakhso leh. ”
Wiilkii qoraaga buuggan haddaba wuxuu daabacay qoraalkiisii ​​labaatanaad:
Su’aalahiisa waxaa la weydiin karaa dhamaan teknolojiyadda iyo warbaahinta. Maxaa inagu dhaca markaynu caashaqno oo haddana iyagu sasabano? Ma na sii daayaan mise way na xidhayaan? Ma horumariyaan ama hoos u dhigaan dimuqraadiyadda? Ma waxay madaxdeenna ka dhigaan kuwo la xisaabtama ama ka yar? Nidaamyadeennu ma ka hufan yihiin mise waa ka yar yihiin? Miyay inaga dhigayaan muwaadiniin fiican ama macaamiil fiican? Ganacsigu ma u qalmaa? Haddii aysan u qalmin, haddana weli kama joojin karno inaan isku qabsanno waxa cusub ee soo socda maxaa yeelay taasi waa sida aan u xirxirnay, haddaba xeelado noocee ah ayaan u dajin karnaa si aan u sii wadno xakamaynta? Sharafta Micnaha? Eeg annaga sheekada wararka ku saabsan sida kooxdii lixaad ee ardeyda dhigata dugsiyada Edinburgh ay maamusho markii aan samaynay shaashadda saacadaha 24.
Isticmaalka qasab ah ee porn?
Iskuday tan si aad u tijaabiso haddii qofku isticmaalayo sawir-gacmeedka internetka.
Haddii qof aad taqaanid ama adiga laftaadu, uu doonayo inuu isku dayo tijaabadan tirtiridda hal-maalin ee loogu talagalay sawir-gacmeedka qaawan ee internetka oo keliya, waa u qalantaa. Haddii aad guuleysato, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isku daydo inaad ku sii darto ciribtirka muddada dheer. Way sahlanaan kartaa in la jaro dabciga 24 saacadood, laakiin toddobaad ama saddex toddobaad ayaa ka badan tijaabada runta ah ee sida caado qasab noqotay u noqotay.
Dib u bilaabista ayaa si dhakhso ah u bilaabi karta. Saacadda koowaad, maalinta ugu horreysa iyo usbuuca koowaad waa marka rebooters inta badan ay dib ugu noqdaan awood la'aan in ay ka gudbaan xayiraadda xiisaha badan. Haddii aad maskaxdaada ku tababartay wakhti dheer, waxay qaadan doontaa wakhti ka hor inta aanad xor u aheyn. Dib u bilaabista maaha hab sahlan. Haddii aad si fudud u aragto, kaliya ku mahadnaq. Dadka intooda badani waxay u arkaan caqabad. Si kastaba ha noqotee, waa la dhajiyay. Ogaanshaha waxa muujinaya calaamadaha dareenka ama jirka ee dib-u-qabsadayaasha kale ee ay ku qabsadeen waddooyinkooda si ay u soo kabtaan waa caawimo weyn.
Kaliya yareynta (yareynta waxyeelada) kama shaqeyneyso inta badan dabeecadaha qasabka ah. Helitaanka hab lagu joojiyo isticmaalka lebbiska ayaa ka reeban. Isla marka aan isku buuqno, oo aan taas helno 'wax hadda samee!' Dareenka, helitaanka waxyeello fudud oo ah kiimikooyin dareen-wanaag ah taleefannada casriga ah ama kiniiniga ayaa noqon kara kuwo aad u habboon. Kaliya yareynta isticmaalka sigaarka kuma filna dadka badankood, waxay sii dheereyneysaa caado. Jidadka si wanaagsan loo horumariyay si fudud ayaa loo xukumay. Waxay qaadan kartaa bilo, xitaa sannado mararka qaarkood madax adag, si loo kobciyo wadiiqooyin cusub oo caafimaad leh dibna looma laaban karo. Waxay kaloo qaadan kartaa dhowr isku day oo tijaabo ah iyo qalad ah si aan u sii wadno caadada ah inaan ka mashquulinno nafsadeena daawashada qaawan, muddada dheer. Marka ka feker kuwan:
Jooji daawashada porno internetka
Baro in aad internetka isticmaasho adigoo aan lahayn porno
Tallaabada 12, dib u soo kabashada SMART iyo barnaamijyada gargaarka wadaagga ah ayaa dhammaantood caawin kara
Baro siduu ahaa nidaamka abaal-marinta ee maskaxdu waxay shaqaysaa. Fahamka in qasabadani ay tahay xaalad maskaxeed oo maskaxeed ayaa ka caawisa in la joojiyo dhibka
Ka digtoonow ficilada iyo calaamadaha ku soo dejiyey qabatinkaaga. Raadi siyaabo laga fogaado
Tallaabada 2 - Naxariiso maskaxda
Inta badan ka-joojinta waxay ka faa'iideystaan ​​nooc ka mid ah taageerada maskaxda. Tani waxay ka imaan kartaa asxaabta iyo qoyska ama xirfadlayaasha u shaqeeya sida daaweeyaha. Tani waa meesha jacaylka qaabka qabashooyinka, xannaanada, saaxiibtinimada, kalsoonida iyo isku xirnaantu waxay dhammaantood kor u qaadi karaan heerarka maskaxda oksijaha ee maskaxda ku jirta. Oxytocin waxay leedahay sifooyin wax ku ool ah oo kaa caawiya isu-dheellitirka socodka korontada iyo neurokimiyada:
Ka-hortagga cortisol (cadaadiska iyo niyad-jabka) iyo dopamine (jugleynta)
Waxay yareysaa calaamadaha ka bixitaanka
Waxay xoojisaa xiriirka iyo dareenka amniga
Dareemo dareen walaac, cabsi iyo welwel
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu dhisi karo adkeysiga culeyska iyo dhibaatooyinka nolol maalmeedka waa nasasho maskaxeed oo joogto ah, qoto dheer. Mid ka mid ah noocyada aadka loo jecel yahay maanta ayaa loo yaqaan 'Mindfulness'. Waxay ka dhigan tahay in si miyir qab ah loo feejignaado wax kasta oo aan dareemeyno ama ka fikirno muddo gaaban qaab aan xukun lahayn. Intii aan caburin lahayn ama aan isku dayi lahayn in aan iska indhatirno fikirradeenna walaaca leh ama aan waqti u helin in aan wax ka qabanno, waxaan u oggolaanaynaa in ay maskaxdeenna soo galaan oo aan daawanno iyaga oo aan isku dayin in aan iska indhatirno ama aan xallino ama xitaa ugu xukunno si xoog ah.
Isku-dubarid wax ku ool ah ee farsamooyinka taageerada ayaa caawin kara. Inta badan waxay kor u qaadaan heerarka oxytocin.
Maskaxdu waxay si fiican ugu shaqeysaa iyada oo lagu daro Daaweynta Dabeecadda Aqoonta (CBT). Halka CBT ay ku shaqeyso miyir-qabka, heerka caqliga leh si loo beddelo caadooyinka xun ee fekerka iyo aragtida, fikirka fekerka ayaa ka shaqeeya miyir-qabka qoto dheer, heerka aan hadalka ahayn.
Wareysiga Motivational (MI) ayaa sidoo kale xaqiijiyay faa'iido leh in lagu caawiyo taageeridda dadka isticmaala daroogada da'yarta si ay u noqdaan kuwo ku lug leh dhiirigelinta fikradaha waxtar leh.
Barnaamijka dhimista cadaadiska diidmada
Fikradaha maaha kuwaan nahay. Waxay yihiin kuwo la beddeli karo oo firfircoon. Waan xakameyn karnaa iyaga; maahan inay na xukumaan. Had iyo jeer waxay caado u noqdaan feker laakiin waan beddeli karnaa haddii aysan noo keenaynin nabad iyo ku qanacsanaanta markaan ka warqabno. Fikradaha waa kuwo awood badan taas oo ah inay badalaan nooca neerfaha kiimikada ee aan ku soo saarno maskaxdeena isla markaana, waqti ka dib iyadoo ku celcelis ku filan, saameyn ku yeelan karto qaab dhismeedkeeda. Maskaxdu waa hab fiican oo nooga dhigaysa inaan ka warqabno darawaladan dareenka hoose iyo sida ay u saameynayaan niyaddayada iyo dareennadayada. Waxaan dib ula soo noqon karnaa xakamaynta.
Iskuulka Harvard Medical School waxbarasho waxay muujiyeen natiijooyinka soo socda maadooyinka ay samaynayeen celcelis ahaan saacadaha Maqaar-27 Maqnaanshaha maalin kasta:
Baadhitaanada MRI waxay muujiyeen in ay yaraadeen maaddada caanka ah (unugyada dareemayaasha) ee ku yaal amygdala (walaac)
Xaaladda culus ee hippocampus - xasuusta iyo barashada
Waxay soo saartay faa'idooyin cilmi-nafsi oo joogta ah maalinta oo dhan
Ka warbixinta hoos u dhaca walaaca
Rikoodhada lacag la'aanta ah ee lacag la'aanta ah
Madadaalada Bilaashka ah
Isticmaal our jimicsi nasasho oo lacag la'aan ah si ay kaaga caawiso inaad nasato oo aad dib u dhigto maskaxdaada. Iyada oo la yareeyo wax soo saarka neurokimiyada culus, waxaad u oggolaaneysaa jirkaaga inuu bogsado. Maskaxdaada waxay isticmaali kartaa tamarta fikradaha waxtar leh iyo fikradaha cusub.
Midkani koowaad wuxuu ku hoos jiraa daqiiqado 3 oo wuxuu kaa qaadi doonaa xeebta qorraxda. Waxay isla markiiba hagaajinaysaa niyadda.
Midkani labaad wuxuu kaa caawin doonaa inaad sii dayso murugada muruqyadaada. Waxay qaadataa daqiiqado 22.37 laakiin waxay dareemi karaan 5 keliya.
Fikradda ku jirta sadexaad waa inaad ku nasto maskaxdaada adiga oo aan muujin wax calaamado ah oo dhaqdhaqaaq jireed ah si aad u sameyn kartid tareenka ama marka dadka kale ku wareegsan yihiin. Waxay soconeysaa daqiiqado 18.13.
Midkan afaraad waa daqiiqado 16.15 oo aad ku qaadato safar macquul ah oo daruur ah. Aad u raaxeysiga.
Fikradeena kama dambaysta ah ayaa ka dambeysa kaliya daqiiqadaha 8 waxayna kaa caawineysaa inaad aragto waxyaabo aad rabto inaad ku guuleysato noloshaada.
Goorma ayaad sameyneysaa nasasho qoto dheer?
Waxaa haboon in la sameeyo jimicsi qoto-dheer oo qoto-dheer leh subaxdii hore ama galabtii galabtii. Ka tag ugu yaraan saacad ka dib markaad wax cuntid ama aad sameyso cuntada ka hor inta aan geedi socodka dheef-shiid kiimikada uusan faragelinin nasashadaada. Sida caadiga ah waxaa wanaagsan in la sameeyo si qumman oo kursi ku fadhiya si toos ah laf dhabarkaaga ah, laakiin dadka qaarkood waxay door bidaan in ay jiifaan. Halista keliya ayaa ah in aad seexan kartid. Waxaad rabtaa in aad miyir beesho si aad u fasaxdo fikradaha niyadjabsan. Ma aha hypnosis, waxaad xakameysaa.
Tallaabada 3 - Baro xirfadaha nolosha ee muhiimka ah
Dadka qaarkiis waxay leeyihiin astaamo hidde ama daciifnimo dhalasho taas oo macnaheedu yahay inay u baahan yihiin wax badan oo ka mid ah 'go get it' neurochemical, dopamine, si loo gaaro heer la mid ah wadista iyo raaxeysiga qof aan lahayn xaaladda hidda-wadaha ee is beddelay. Dadkaas, tiro yar, waxay u nugul yihiin balwadda kuwa kale. Guud ahaan si kastaba ha noqotee, dadku waxay ku dhacaan dabeecad qasab ama balwad laba sababood oo waaweyn.
Maxaa mukhaaddaraad ah?
Marka hore waxay bilaabaan inay raadsadaan raaxo iyo baashaal sida kuwa kale laakiin daweynta mararka qaarkood waxay si fudud caado u noqon kartaa. Waxaan dhamaanteen si fudud ku galnaa ballanqaadkii 'baashaal' xitaa haddii natiijadu lumiso shaqo, xanuun, hangovers, ballamo la seegay, ballamo jaban. Waqti ka dib cadaadiska bulshada iyo xayeysiintu waxay noo horseedi karaan inaan ku qanacsanaano raaxooyinka keena maskaxda maskaxda oo isbedeleysa nidaamka abaalmarinteena taasoo ka dhigeysa hamiga waligiis inuu adkeysto. FOMO ama 'ka baqid la'aanta' waa ciyaar maskaxeed bulsho oo aan u baahanahay inaan ka digtoonaano. Warbaahinta bulshada ayaa gacan ka geysata kobcinta dixiriga maskaxda ee gaarka ah.
Dariiqa labaad ee balwadu u kobcin karto wuxuu ka yimaadaa rabitaan hoose oo miyir qab ah si looga fogaado xaalad xanuun ama dadaal nolol maalmeed kasta. Way soo kici kartaa maxaa yeelay qofku weligiis ma baran xirfadaha nolosha si uu ula qabsado dhacdooyinka sida xaaladaha cusub, la kulanka dadka, isku dhaca ama khilaafaadka qoyska. Raaxo raadin ayaa marka hore yareyn karta cadaadiska ama dejin kartaa xanuunka, laakiin ugu dambeyntii waxay noqon kartaa walaac ka weyn dhibaatada asalka lafteeda. Balwadu waxay qofka u horseedaa inuu gebi ahaanba diiradda saaro baahidiisa isla markaana aan shucuur ahaan u helin dadka kale. Cadaadisku wuu kordhayaa oo noloshu dushooda ayay ka sarreysaa, iyada oo aan la xakamayn karin. Xayeysiiyeyaasha howlaha kicinta sida galmada, aalkolada, khamaarka, cunnada qashinka ah, iyo ciyaaraha si loogu magac daro in yar, ugaarsi rabitaankeena ah inaan raadino madadaalo oo aan iska indhatirno shucuurta xanuunka leh ama xaaladaha ku lug leh dadaal.
Barashada xirfadaha nololeed ee muhiimka ah ayaa kaa caawin kara isbeddelkan taas oo yareyneysa khatarta ah inuu ku dhaco niyad-jabka iyo takoorka. Ka takhalusida dabeecadaha la qabatimay inta badan kuma filna. Jawaabta kicinta ee walbahaarka ayaa wali sii joogi doonta taas oo qofka uga dhigeysa mid jilicsan oo aan awoodin inuu la kulmo dhaleeceyn ama isku dhac. Waxaa jira sheekooyin badan oo dad ah oo maareeya inay ka baxaan khamriga ama daroogada oo ay helaan shaqo kaliya inay ku burburaan calaamadaha ugu horreeya ee khilaafka, ka dibna soo noqoshada. Waxaa jira sheekooyin wanaagsan sidoo kale ragga iyo dumarka dhalinyarada ah kuwaas oo hela xoog iyo geesinimo cusub oo ay ku wajahaan xaaladaha adag markay joojiyaan galmada. Qaarkood waxay ka hadlaan horumarinta “quwadaha waaweyn”.
Dadka ku jira soo kabashada waxay ku guuleystaan ​​ugu fiican waxayna ka fogaadaan soo noqoshada markay horumariyaan xirfadaha nolosha si ay u ballaadhiyaan una dhisaan noloshooda kana dhigaan mid xiiso badan oo qancisa. Waxay macnaheedu tahay helitaankooda iyo raaxadooda ilaha caafimaadka leh gaar ahaan la xiriirka dadka kale shaqsi ahaan iyo iska daa ceebta, dambiga iyo dareemida inaan la jeclayn, go'doon ama kali.
Waxaa jira xirfado badan oo kala duwan oo loo yaqaano in lagu caawiyo:
Xirfadaha nololeed ee lagu dhisayo samaqabka jirka
Barashada wax lagu kariyo oo ku raaxee cuntooyinka caafimaadka leh
Helitaanka hurdo ku filan oo hurdo leh, saacadaha 8 habeenkii dadka waaweyn, saacadaha 9 ee carruurta iyo dhallinyarada
Jimicsi jimicsi, gaar ahaan waqtiga aad ku qaadato dabeecadda
Jimicsiyada nasashada maskaxda - tusaale ahaan feejignaanta ama maskaxdaada oo kaliya u oggolaan
Xirfadaha nolosha si loo dhiso kalsoonida
Maskax aan caqli lahayn waxba ma qaban karto. Barashada xirfad cusub tallaabo-tallaabo waxay abuuri kartaa kalsooni. Waqti ayey qaadataa. Maskax fidsan waligeed dib uguma laabaneyso sidii ay markii hore ahayd. Ma jiro qof naga qaadi kara xirfad la bartay. Xirfado badan oo aan leenahay, ayaa inbadan aan ku badbaadi karnaa xaaladaha isbeddelaya. Xirfadahani waxay yareeyaan culeyska nolosha fowdada ah
Baro inaad xakamayso fikradaha, dareenka iyo riyooyinka galmada
Xirfadaha abaabul ee guriga ka socda - nadaafadda iyo howlaha wax iibsiga; habeynta waraaqaha muhiimka ah, biilasha iyo risiidhada
Baro sida loo dalbado shaqo iyo u diyaargarow wareysiyada
Awood dhaqaale - barashada miisaaniyadda iyo haddii ay suurtagal tahay, badbaadi
Xirfadaha nolosha si ay ula xiriiraan dadka kale iyada oo loo marayo wada xiriirka
Barashada inay noqoto mid macquul ah marka ay ku habboon tahay marka laga reebo kuwa gardarrada ah, gardarro xun ama si xawli ah
Xirfadaha dhegeysiga ee maqalka iyo muuqaalka
Xirfadaha maareynta isku dhaca
Isdhexgelinta caafimaadka leh, sida xiriirka qoys ee is-dhexgalka
Xirfadaha nololeed ee kor u kaca, sii balaarin kuna dhisnaanshaha nafsadda buuxda
Noqoshada hal-abuurnimada si aad u muujiso dareen dareen-qoto-dheer oo barashada heesaha, qoob-ka-ciyaarka, cayaarida qalabka, sawirida, ranjiga, qorista sheekooyinka
Ku raaxeyso, ciyaaraha ciyaaraha, qoslaya, u sheeg majaajillo
Shaqo iskaa wax u qabso ah, caawinta dadka kale
Boggan boggaan wuxuu siiyay oo keliya tusaaleyaal sahlan oo ku saabsan qaabka dib u soo kabashada ee Reward Foundation 3. Waxaan soo saari doonaa waxyaabo dheeraad ah si aan u taageerno mid kasta oo ka mid ah qodobada bilaha soo socda. Waxaad samayn kartaa fasalo xirfadaha nolosha ee dugsiga, kooxaha naadiyada ama bulshadaada. Ka hubi maktabadda xaafadaada ama internetka.
Waa kuwan seddexda talaabo ee fudud:
1 - Jooji isticmaalka galmada
2 - caqli yeelo
3 - Baro xirfadaha nolosha ee muhiimka ah
<< Tagitaanka Bilaashka Bilaashka ah TRF 3-Tallaabo Barnaamijka Ka Hortagga >>